Steam inopemberera makore masere kubvira pakatangwa Beta yeLinux | Linux Vakapindwa muropa
Isaac | | Misangano / Zviitiko / Hurukuro, chiutsi
chiutsi Yakave ichiwanikwa yeLinux, mune yayo beta vhezheni, kwemakore masere. Mugwagwa murefu uzere nekukunda kukuru munyika yemitambo yemavhidhiyo pasi pechikuva chepenguin. Iyo purojekiti yakatanga neiyo shoma beta vhezheni iyo yakaona vanhu vanopfuura makumi matanhatu ezviuru vakatanga kusaina kuyedzwa
Zvishoma nezvishoma, Valve akaona kukura kwakaita nharaunda yevashandisi nekukurumidza kusvika kwevanhu Zvita 2012. Chekupedzisira, iyo vhezheni yatinoziva tese nhasi yaizosvika mu2013. Kusvikira zuva ranhasi, zvinhu zvakawanda zvachinja mune ino vhidhiyo mutambo wevatengi, chimwe chinhu icho vashoma vaizofunga chingagone makore mashoma apfuura ...
Rwendo urwu rwakaona akawanda mazano, kusanganisira iyo SteamOS distro. Valve yairatidza kutsunga kurwira mitambo paLinux. Kunyangwe paine vamwe vakakuvadzwa, senge yakakurumbira Steam Machine, haasi mapurojekiti ese asina kubudirira. Vamwe vakabudirira kwazvo, vachiwedzera indasitiri yemavhidhiyo. Semuenzaniso, Proton yeSteam Play (inoshanda padhuze neCodeWeavers), uye kunyangwe rutsigiro rweOpenXR, pamwe neDXVK uye VKD3D-Proton, nezvimwe.
Munguva iyoyo, ivo havana kungogadzira mapurojekiti, ivo vane zvakare vakabatana kugadzirisa vamwe. Semuenzaniso, ivo vakabatsira kunatsiridza MESA madhiraivha emagetsi, vagadziri vavo vakashandawo pane zvimwe zvikamu zvegrafiki stack, uye vakatove nechekuita mukushanduka kweVulkan graph API (kugadzira zvitsva zvitsva), nezvimwe.
Uye hatifanirwe kukanganwa mavhidhiyo evalve ake emitambo anowanikwa kuLinux natively, senge Hafu Hupenyu, Portal, nezvimwe. Kana iyo shader pre-cache system uye zvimwe zvinowedzera zvevhidhiyo shading shadhi, Steam Linux Runtime Container "Pressure Vessel" (yakabatana naCollabora) kuve nechokwadi kuti majusi ekare anomhanya nemazvo pamaitiro matsva, zvichingodaro.
Asi mushure meizvi 8th Anniversary, Steam haina kumira. Iwe haugare zvisina basa pano. Muchokwadi, kune akawanda akawanda mapurojekiti akatogadzirirwa pamepu, uye ivo vachange vaine GNU / Linux mupfungwa. Semuenzaniso, Pierre-Loup Griffais anga achishanda paMitambocope, iyo inotaridza kuvimbisa. Pfungwa iyi kuve nekutonga kwakazara pakuratidzwa kwemitambo.
Kwese kuyedza uku kwakakonzera runyorwa rweanopfuura 7000 mavhidhiyo emitambo mazita pane Steam neGNU / Linux rutsigiro. Kukura kwave kungangoita chiuru kubva Kubvumbi gore rino. Uye mazana akati wandei akawedzerwa munguva pfupi yapfuura. Izvo pasina kufunga nezveProton inoenderana dura, iyo inowedzera zviuru zvinoverengeka zvekutamba kune izvo zvinyorwa. Ndiani angadai akafunga makumi maviri emakore apfuura kuti izvi zvingave zvakadaro nhasi?
Anofara Mazuva masere ekuberekwa, Steam!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Steam inopemberera makore masere kubvira kuburitswa kweBeta kweLinux
Oo Mwari wangu, iripi STEAM MACHINES uye SteamOS chirongwa ... buff, makore eizvi apfuura.